Thwebula XSplit Broadcaster 2.9.1611.1627 – Vessoft
Thwebula XSplit Broadcaster
XSplit Umsakazeli – a isofthiwe ethandwa for screen ukuthunjwa computer kanye ukusakazwa of ezahlukene isiqophi materials. Isofthiwe kwenza ukushintsha phakathi ezihlukahlukene of okusakaza ngesikhathi transmission, ukwengeza okuqukethwe camcorder, ukwengeza izingxenye akhethiwe of computer screen, izithombe kanye flash kokuqukethwe. Isofthiwe iqukethe amathuluzi amaningi ukuba alungise isithombe kanye signal izinga yokudlulisela kucatshangelwa amathuba of computer yakho. Isofthiwe isekela umsebenzi namasevisi popular YouTube, Twitch, Dailymotion, GG !!, Justin.tv, Ustream kanye nezinye. Isofthiwe futhi ikuvumela ukuba ugcine ukusakaza computer analysis eminye kanye nokuhlelwa.
Screen bamba and ukusakaza
Ukusebenza amakhamera multiple
Sekela amasevisi amaningi ukusakaza
Amazwana on XSplit Broadcaster:
XSplit Broadcaster Ahlobene software:
English, Afrikaans, Українська, Français... Playkey 1.2.25.38649
English, Español, Русский, Türkçe... Mobogenie 3.3.7